Wararka - Haanta Kaydka Shidaalka Ku Meel Gaarka ah ee Macdanta iyo Beeraha
Haanta Kaydka Shidaalka Ku Meel Gaarka ah ee Macdanta iyo Beeraha
Haamaha Kaydinta Shidaalka ee Burburi kara ayaa ah qaab kharash wax ku ool ah oo lagu kaydiyo cabitaannada badan ee ku jira beerta shidaalka ama goob weyn oo lagu keydiyo. La daabulay oo si fudud loo daadgureeyay, taangiyadayada dabacsan ayaa ah xulashada ugu habboon ee keydinta shidaalka ku meel gaarka ah inta lagu jiro howlaha macdanta, dayactirka dhuumaha, howlaha militariga, iyo inbadan.
Haamaha Burburi kara ee Beeraha Shidaalka
Haamaha kaydinta dareeraha badan ee la dumi karo waxay bixiyaan faa'iidooyin dhowr ah oo ka mid ah taangiyada adag ee keydka dareeraha ah. Faa'iidooyinka qaar waxaa ka mid ah:
Awood Weyn: Taangiyada waxaa lagu sameyn karaa awood ahaan illaa 210,000 galaan, taas oo u oggolaaneysa kaydinta awoodda ballaaran ee qiimaha aad uga yar.
Shaqaalaynta Degdega ah iyo Samee: Taangiyada rogrogmi kara ayaa la soo raray, markaa waxaad heli kartaa tiro badan hal mar isla markaana si dhakhso leh ayaad u bilaabi kartaa mashruucaaga. Hawlgalinta degdegga ah waxay sidoo kale ka dhigtay iyaga kuwo ku habboon xaaladaha degdegga ah.
Cimilada Wide: Haamaha keydinta shidaalka ee ku-meel-gaarka ah ayaa loo sameeyay inay iska caabiyaan cimilo kala duwan.
Faahfaahin sare ama hoose oo la heli karo: Waxay kuxirantahay codsiyadaada, taangiyada waxaa lagu sameeyaa muuqaal sare ama hooseeya si ay kaaga caawiyaan la kulanka baahiyahaaga.
Taangiyada isdaba-joogga ah ayaa la dhigaa qaabka beeraha shidaalka sida lagu arkay naqshada tusaalaha hoose. Haamaha shidaalka ee la kala qaadi karo ayaa la dhigaa hareeraha xarig shidaal oo ku xiran mid kasta oo ka mid ah haamahan.
Wixii macluumaad dheeraad ah ama naqshad taangiyo kale ah, ku soo dhowow inaad noo soo dirto emayl rdflexitank@126.comama wac 86-13589398394! Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kula shaqeyno mashruucaaga gaarka ah oo aan helno naqshad adiga sida ugu fiican kuugu shaqeyn doonta.